🥇 xisaabaadka dhakhtarka ilkaha
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 760
Fiidiyowga xisaabaadka ilkaha
Buug-xisaabeedka takhtarka ilkaha xisaabtiisa shaqada waxaa lagu magacaabi karaa nooc dokumeenti ah oo ay tahay inuu dhakhtarka ilkaha kasta lahaado si loo xakameeyo howlaha iyo howlaha khubarada. Diiwaanka xisaabaadka ee dhakhtarka ilkaha ee orthopedic si sax ah looma xakamayn karo, maxaa yeelay takhasuslaha waxaa laga yaabaa inuusan si fudud waqtiga ku jirin, ilaawin ama uusan rabin inuu sameeyo xisaabinta maalinlaha ah ee shaqadiisa, maxaa yeelay dhammaantood ma haystaan waqti, rabitaan. Taas ka sokow, arrimo kale ayaa sidoo kale farageliya. Nasiib wanaagse, waxaa jira xal loo helo dhibaatooyinkaas. Thanks to xalkan, xisaabinta maalinlaha ah ee dhakhaatiirta ilkaha shaqadooda si toos ah ayaa loo buuxin karaa. Iyo, isla mar ahaantaana, tani waxay noqoneysaa mid caadi ah oo waajib ku ah in la sameeyo, isla mar ahaantaana adiga iyo dhakhtarkaagu waqti kuma lumisaan. Waxaan ka hadleynaa nidaam u gaar ah oo ku siinaya adiga shaqooyinka xisaabinta dhakhtarka ilkaha oo kuu oggolaanaya inaad kormeerto shaqaalaynta takhasusle kasta - tani waa barnaamijka xisaabinta USU-Soft. Codsiga waa analoogga elektiroonigga ah ee buug-gacmeedka buug-gacmeedka, kaas oo dhakhtarku ku galo natiijooyinka shaqada. Shaqaalaha awooddu waxay geli karaan isbeddelada barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha, sidaas darteedna, xisaabinta saacadaha shaqada ama ballanta bukaanada waa la habeeyay oo marwalba waad xakamayn kartaa shaqaalaha adoo kaashanaya barnaamijkan waxtarka leh ee dhakhaatiirta ilkaha. Dhammaan ficillada lagu duubay barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha waa la keydiyaa, halka qofka shaqaalaha ah ee soo geliyay softiweerka, iyo sidoo kale waqtiga iyo taariikhda la tilmaamay.
Barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha si otomaatig ah ayuu u shaqeeyaa; waxaad u baahan tahay oo keliya inaad soo gasho adeegga, xubinta shaqaalaha ee macaamiisha la macaamili doonta, waqtiga iyo taariikhda ballanta. Ku darista taas, haddii aad muujiso qiimaha isticmaalka maaddada markaad adeeg bixinayso, barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha wuxuu hayaa diiwaanka agabyada wuxuuna si toos ah uga soo saarayaa bakhaarka. Barnaamijku wuxuu awood u leeyahay inuu ku xirnaado taleefanka, kaas oo ku siinaya xawaare sare oo aad kula shaqeyso macaamiisha. Intaas waxaa sii dheer, dalabka USU-Soft wuxuu leeyahay shaqo loogu talagalay in lagu habeeyo qaabka sheybaarada baaritaanka, cabashooyinka iyo faahfaahinta kale ee loo adeegsado bixinta adeegyada macaamiisha. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku dheelitirnaan ku sameyso shaqada ku saabsan buuxinta faylasha. Khariidada ilkaha, oo laga heli karo softiweerka, waxay kaa caawineysaa inaad diiwaangeliso natiijooyinka hawlgallada qaarkood. Intaas waxaa sii dheer, waxaad muujineysaa gabi ahaanba ilig kasta oo waxaad u sameyneysaa sharaxaad farsamo-yaqaanno isku khariidad leh. Iyada oo gacan ka heleysa USU-Soft, waxaad si otomaatig ah u haysaa diiwaanka shaqaalle kasta, intaad xaddidi karto suurtagalnimada inaad bedesho oo aad tirtirto diiwaanada, sidaasna aad ku xakamayso shaqaalaha. Sooftiweerku waa nidaam jiil cusub oo xisaabinta dhakhtarka ilkaha ah oo kaa caawinaya inaad kor u qaaddo ilkaha oo aad u keento heerka horumarka dherer aan horay loo arag oo aad u siiso adeeg tayo leh macaamiishaada.
Warbixinta 'Diiwaan-gelinta Hore' waxay soo bandhigeysaa xog ku saabsan inta ballamo ee hadda ku jira diiwaanka. Macluumaadkan waxaa duubay barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha maalin kasta isla waqtigaas. Maaddaama hoos u dhaca tirada ballantu ay mararka qaarkood la xiriirto xilliyeed ama ciidaha qaarkood iyo dhacdooyinka magaalada, waxaa ka sii tilmaam badan in la fiiriyo muunadda muddo dheer oo ku filan, tusaale ahaan sanadkii la soo dhaafay (iyo bil la mid ah tan hadda jirta) maalinta hadda. Jadwalka soo baxay waxaad ku arki kartaa inta ka horeysa jadwalka la rakibayo - tirada ballamaha ee dhakhtar kasta, iyo qaansooyinka tirada bukaannada u diiwaangashan ballamahan (booqashada koowaad iyo tan soo noqnoqota). Jaantuska ka hooseeya jadwalka wuxuu muujinayaa sida xaaladda culeyska shaqadu isu beddelo waqti ka dib. Shaandhada 'Xaaladda', waxaad ku dooran kartaa bukaannada aad xiiseyneyso - 'Booqashada Koowaad' ama 'Booqashada Soo noqnoqda'. Tusaale ahaan, waxaad leedahay dallacsiin, waxaadna rabtaa inaad ogaato inay shaqeyneyso oo soo jiidato bukaanno cusub - ka dibna 'Booqashada Aasaasiga ah' ku dheji xaaladda (bukaanada aasaasiga ahi waa kuwa aan weli ballan yeelan.)
Tusaalooyinka diiwaanka bukaan-socodka ee diyaarka ah ayaa kaa caawinaya inaad si weyn u yareyso waqtiga ay ku qaadato inaad ku buuxiso diiwaankaaga bukaan-socodka. Intaa waxaa sii dheer, haysashada sheybaarradu waxay hubinaysaa in dhakhaatiirta oo dhami ay buuxiyaan diiwaanada bukaan-socodka iyagoo isticmaalaya isla shaxanka. Si loo fududeeyo buuxinta diiwaanka bukaan socodka, barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha sidoo kale wuxuu u qaabeeyaa asal ahaan cilaaqaadka ka dhexeeya 'Baaritaanka' iyo tusaalooyinka kale. Iyadoo la raacayo baaritaanka la soo xulay, barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha wuxuu sifeeyaa 'Cabashooyinka' ku habboon, 'Anamnesis', iwm. Waad tafatiri kartaa xiriiriyadan. Markuu bukaanku yimaado rugta caafimaadka ilkaha markii ugu horeysay, macluumaadka ku saabsan xaalada bukaanka (cabashooyinka, ogaanshaha, xaalada ilkaha iyo afka) waxaa lagu qori karaa barnaamijka xisaabinta dhakhtarka ilkaha. Si tan loo sameeyo waxaad u baahan tahay inaad sameysid dukumiinti baaris bilow ah. Si loo siiyo bukaanka hagitaan ku saabsan qiimaha daaweynta waa hab lagu jiheeyo bukaanka qiimaha kala duwan ee daaweynta muddada-dheer iyo / ama qaaliga ah. Waxay u oggolaaneysaa dhakhtarka inuu sameeyo talooyin ku saabsan xulashooyinka daaweynta, isagoo ku taageeraya xisaabinta. Tani waxay kaa caawineysaa inaad bixiso adeeg tayo leh oo aad u beertid bukaan kasta jilicsanaanta shaqada gudaha ee rugta caafimaadka ilkaha. Taas ka sokow, u fiirsashada faahfaahinta ayaa hubaal ah inay ku guuleysaneyso kalsoonida bukaannadaada taasna waxay keentay inay hubiyaan inay ixtiraamaan sumcadda aad ka heli karto barnaamijka USU-Soft ee horumarsan ee xisaabinta iyo maaraynta dhakhtarka ilkaha.